Waa kee wadanka ugu fiican aduunka? kaalintee gashay Sweden? - iftineducation.com
iftineducation.com – Baaritaanka lagu sameeyay heerka nolosha, dhaqaalaha iyo xoriyada wadamo gaaraya 60 wadan ee ugu horumarsan caalamka ayaa dhawaan la soo bandhigay, iyadoo uu kaalinta 1-aad galay wadanka Germany. Kaalinta 2-aad ayaa waxaa galay wadanka Canada halka sadexaad ay gashay UK, afaraad waxaa galay US, halka Sweden ay gashay kaalinta 5-aad.
Baaritaankaan oo ay samaysay shirkada WPP ayaa waxaa ka qeyb qaatay dad gaaraya 16,000 qof oo wax laga waydiiyay su’aalo gaaraya 75 qodob. Germany oo 1-aad gashay ayaa lagu amaanay arimo badan oo ay ka midyihiin dhaqaalaha wadankaasi oo xoog leh, shaqo la’aanta oo hooseysa iyo soo dhaweynta qaxootiga oo Germany ay sanadkii la soo dhaafay iska dhiibeen dad ka badan 1 milyan qof.
Hadaba sidee u aragtaa arintaan? maku qanacsantahay in Sweden ay gashay kaalinta 5-aad?